BBC Somali - Ganacsi - Korontada Ceerigaabo
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 3 Novermber, 2011, 17:49 GMT 20:49 SGA
Shirkada Ebco ee korontada ayaa laga furay magaalada Ceerigaabo
Shirkada Ebco ee korontada ayaa laga furay magaalada Ceerigaabo.
Shirkada ayaa waxaa isla leh ganacsato Soomaali ah waxaan ku baxday lacag dhan hal milyan oo dollar hirgalinteedii.
Maxamoud Axmed liibaan oo ka mid ah milkiilayaasha shirkada ayaan ka waraysanay furitaanka shirkada iyo waxa ay soo kordhinayaan.
Iyadoo ay aad u hoosayso saadaalinta kororka dhaqaalaha ee Yurub iyo Maraykanka ayaa toddobaadkan hayaad lacagta adduunka ee IMF ay warbixin ay soo saartayku sheegtayin wadamada saxaaraha ka hooya ee Afrika uu dhaqaalahoodu kobci doono i ka badan shan boqolkiibasanadkan iyo sanadka 2012.
Nigeriya ayaa ka mid ah wadamada dhaqaalahoodu uu aadka u kordhayo iyadoo Nigeriya ay soo saarto shidaalka oo qiimahiisu uu hadda sareeyo. Dadka reer Nigeriya ee ku nool Yurub iyo Maraykanka ayaa dib ugu noqonaya waddankooda si ay uga faaidaystaan fursadaha ganacsi ee ka jira wadankooda.
Magaalada Lagos waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha BBCda Jonah Fisher.
Shir looga hadlaayo dhibaatooyinka daymaha Yurub ayaa ka socda magaalada Brussels, waxaa looga hadli doono waxaa ka mid ah sidii lacago maalgalin looga heli lahaa dalalka dhaqaalaha waawayn ee soo koraya sida Shiinaha iyo Brazil. Madaxa hayadda Yurub ee EFSF ee loo sameeyay inay lacago dayn ah siiso dalalka yurub ee daymaha aan iska bixin karin ayaa booqan doona toddobaadkan dalka Shiinaha wariyaha BBCda Andrew Worker.